Posted on November 5, 2018 November 5, 2018 by Farm Nepal
ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घटेपछि चितवनका कुखुरापालक किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरुले भरतपुरको चौबिस कोठीदेखि नारायणगढ पुलचोकसम्म विरोध र्‍याली निकालेका छन् । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घटेपछि आफूहरुले उचित मूल्य नपाएको र मूल्य घटेपनि उपभोक्ताले सस्तोमा मासु उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ । लागत मूल्यभन्दा कममा कुखुरा बेच्न बाध्य भएको उनीहरुले बताए ।
लागत मूल्य ३ सय ९० रुपैयाँ पर्ने एउटा ब्रोइलर कुखुरा बेच्दा अहिलेको बजार मूल्य अनुसार ३ सय २५ रुपैयाँसम्म पर्ने नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष झनक पौडेलले बताउनुभयो ।
किसानबाट किनेको ज्यूँदो कुखुरा मासु बनाएर उपभोक्तालाई बेच्दा प्रति किलो जाडोमा ९० र गर्मीमा १ सय १० रुपैयाँ भन्दा बढी फरक हुन नहुने नियम पनि छ । तर अहिले कुखुराको प्रति किलो मूल्य १ सय ३० हुँदा उपभोक्ताले किन्ने मासुको मूल्य २५० रुपैयाँ भन्दा बढी नै छ । ‘न हामी किसानले मूल्य पाएका छौं । न उपभोक्ताले सस्तोमा मासु पाएका छन्’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ लामिछानेले भन्नुभयो ।
चल्ला र दानाको मूल्य बढ्दा कुखुराको मूल्य घटाएर किसानमाथि अत्याचार नै गरेको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष झनक पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘दानाको मूल्य किन बढ्छ ? चल्लाको मूल्य किन बढ्छ ? त्यसको कारण चाहियो नि । दानाको मूल्य बढेका बेलामा हामीले पालेका कुखुराको मूल्य भने घट्ने, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ ? सरकारले ख्याल गर्नु पर्ने हैन ।’
उहाँले किसानका प्रतिनिधि कुखुरा पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरु रहेको एउटा संयन्त्र बनाउन माग गर्नुभयो । ‘त्यो संयन्त्रले मूल्य निर्धारण गरोस, दाना चल्ला औषधिको मूल्य मनपरी नबढोस, लागतका आधारमा किसानको मूल्य पनि निर्धारण होस’ पौडेलले माग गर्नुभयो ।
देशको ६४ जिल्लामा कुखुरा पालन हुन्छ । त्यसमध्ये २७ जिल्लामा आफूहरुको सम्पर्क र १२ जिल्लामा संगठन भएको उहाँले बताउनुभयो । संघका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘नभए हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।
किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।’ १० वर्षदेखि कुखुरा पाल्दै आएका रत्ननगरका थमबहादुर थापा सुरुका तीन वर्ष लगातार घाटा बेहोरेको बताउँछन् । त्यसपछि पनि नाफा एकाध वर्ष मात्रै भएको बताउँछन् । ‘खोर बनाइयो, रित्तो के राख्ने तर पालेर आफै डुब्न थालियो’ थापाले भने ।
भ्याली कोल्ड स्टोर गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा अग्रणी